Nchọgharị: Martin Vrijland
Ezigbo Peter R. de Vries, enwere mmasị dị ukwuu m soro usoro mgbasa ozi site na mgbasa ozi Nicky Verstappen, bụ nke a mara Jos Brech kpam kpam. Maka ihe doro anya: Abụghị m onye na-agbachitere Jos Brech ma ọ bụ nwatakịrị ọ bụla a na-emegbu ma ọ bụ onye gburu ọchụ. Otú ọ dị, o yiri ka okwu a ọ bụ nke uche [...]
Site na akwụkwọ akụkọ dị ndụ nke onye nta akụkọ telivishọn bụ Saskia Belleman, ọ na-egosi na Nicky Verstappen (nsogbu) okwu gbasara onwe ya abụghị ihe ọ bụla karịa nkwupụta. Ụfọdụ tweets na-agbaso nke ga-egosi na Jos Brech kwetara na ya nwere ụmụ okoro foto na PC ya, kama na ha na-ekwu na ha nwere nje. Jos [...]
Ọ bụ nchọta ngwa ngwa, ọ bụ ọrụ na-agaghị ekwe omume, ma na mberede, e nwere faịlụ ochie nke Jos Brech, bụ nke ọ ga-eme na ụmụ nwoke na-emeghị ihe ọjọọ. A na-atụle ikpe ahụ n'ọnọdụ ahụ, ma nke ahụ adịghị mkpa. Peter R. de Vries nọ na ya niile kọntaktị [...]
O doro anya na a kwụsịrị na Netherlands dum na ikpe Nicky Verstappen mere ka Jos Brech jide ya. Na mbu, DNA mere ka Jasper Steringa jide na ihe ndị Marianne Vaatstra, ya mere, DNA bụ ihe mepụtara. Ọ nwere ihe ọbụla mere ka a banye n'usoro usoro iwu ọhụrụ nke onye ọrụ akụkọ nta akụkọ bụ Peter R. de [...]
Ihe ka ukwuu n'ime igbu ọchụ igbu ọchụ nke na-adị ogologo oge nke natara nnukwu ntị na mgbasaozi na-edozi ugbu a na okwu nrọ DNA. Ọfọn, Pita R. de Vries kpebiri site na ụlọ ọrụ ikpe site na mgbasaozi ma mee ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-aga n'ụlọikpe nke na-ewepụ okwu ikpe ọha na eze, n'enweghị ezigbo nchebe iwu. [...]
O juru anya na m lere Pauw anya, nke ọkàiwu Jos Brech, Gerald Roethof, nụchara akụkọ ya na isiokwu m bipụtara otu ụbọchị tupu mgbasa ozi ahụ. Ọ bụ ihe dị egwu na e nwere mberede abụọ nchara ọhụrụ na tebụl. Ntughari ohuru nke na eme ka ndi mmadu kwenye banyere [...]
Ọ bụrụ na ị na-amasị OM nwere afọ iji dozie ndị ọhụrụ jikoro site a PSYOP (psychological arụmọrụ), mgbe ahụ, N'ezie ị na-ahụ na i nwere ezi ọgụgụ na nri ọnọdụ na akụkọ na-eru uju anọgide spiders. Nke ahụ pụtara na ị a mie [...]
gbara akwụkwọ Gbanwee NICKY, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 September 2018	• 2 Comments
Akụkọ banyere Jos Brech, onye ebubo na-egbu egbu na onye na-emegbu Nicky Verstappen, na-agbasi elu. Ụnyaahụ, e bugara ya na Netherlands na ụgbọelu nke onwe ya. O nwere ike iri ụfọdụ! Enweghị ike ịchọta ụgbọ elu, n'ihi na anyị na-ekwu okwu banyere onye nwe ọgwụ ọjọọ na-egwu egwu nke nwere ike ịhapụ ndị enyi ya ma ọ bụ n'oge ọ bụla. [...]
DNA bụ ụzọ ọhụrụ nke ndị uweojii na ikpe ziri ezi na onye ọ bụla jupụtara otuto! Na DNA ị nwere ike idozi ihe niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye agbata obi gị hụrụ anwụ ma DNA dị na uwe ya, anyị maara ozugbo onye onye ahụ gburu! Nke ahụ bụ n'ezie ihe omimi n'ime nkà na ụzụ [...]
Usoro ntinye Netflix 'Ime onye ngbu' na-egosi ot 'ndi mmadu nwere ike isi dabere na nkwubi okwu na-ezighi ezi ruo otutu afo. Ebe DNA dị n'usoro isiokwu ahụ bụ mgbe ọ bụ ihe mgbapụta, DNA nwekwara ike ịbụ ụkpụrụ ọhụrụ nke na-eme ka onye na-egbu mmadụ kwụsị. Na ọrụ uche gị (PsyOp) ị ga-ahụ [...]
Nleta ha: 2.560.974
SalmonInClick op Ọtụtụ puku ndị mmadụ nọ na Dam Square kwụrụ George Floyd ngagharị iwe ma ọ bụ oge ọ bụla maka onye ọ bụla amaghị?
Martin Vrijland op Ọtụtụ puku ndị mmadụ nọ na Dam Square kwụrụ George Floyd ngagharị iwe ma ọ bụ oge ọ bụla maka onye ọ bụla amaghị?